Laptọọpụ 4K kacha mma nke 2022, nke ị ga-azụta?
Mgbe anyị na-ekwu maka laptọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ nwere sistemụ arụmọrụ, anyị na-ebukarị ụzọ kwuo ya processor na RAM, ikekwe n'usoro dị iche, mgbe ahụ draịvụ ike ya na ihe ọ bụla ọzọ. Ọtụtụ oge anyị na-ahapụ nkọwapụta dị ka ihuenyo ikpeazụ, mana nke a ọ bụ ezigbo echiche? M na-eche na ọ bụghị, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị ga-arụ ọrụ na ihe na-achọ ezi image àgwà. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe anyị, ọ bara uru ịtụle a laptọọpụ nwere ihuenyo 4K.
Anyị nwere ike ịsị na a ezigbo ihuenyo ugbu a na 2020 ọ bụ nke nwere opekempe mkpebi nke 1920 × 1080 pikselụ, nke dakọtara na Full HD. Ọ bụ ezie na ihuenyo ndị a na-enyerịrị ezigbo mma, a ka nwere ma ọ dịkarịa ala nzọụkwụ abụọ n'elu nke nwere ike ịba uru dabere na ọrụ anyị: 2K na 4K. N'isiokwu a, anyị ga-ekpughe ihe nzuzo niile ịchọrọ ịma gbasara laptọọpụ nwere ihuenyo 4K, akụrụngwa emebere maka ndị ọrụ na-achọsi ike.
1 Laptọọpụ 4K kacha mma
1.3 MSI Summit
1.5 Laptọọpụ Anya Microsoft
2 4K ma ọ bụ Full HD laptọọpụ?
3 Enwere laptọọpụ 4K dị ọnụ ala?
4 Kedu ka laptọọpụ 4K kacha kwesịrị ịdị ka
5 Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ nwere ihuenyo 4K?
6 Laptọọpụ 4K ọ bara uru?
Laptọọpụ 4K kacha mma
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ laptọọpụ nwere ihuenyo 4K "dị ọnụ ala", ị nwere ike ịmasị Lenovo Yoga C920. Ọ bụ otu onye Ihuenyo 13.9-inch bụ mmetụ, nke ga-enye anyị ohere iji ohere ọrụ Windows 10 mbadamba ihe. N'ihi obere nha ya, nke a bụ kọmputa ultralight nke dị naanị 1.37kg.
Lenovo Yoga 920 -…
A ga-akwado sistemụ arụmọrụ site na ngwa ndị dị elu, dị ka Intel's i5 processor, 8GB RAM na draịvụ ike SSD, 512GB na nke a. Ọ bụ otu nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ ọ bụla n'ụzọ dị ngwa ngwa, dị nro na nke kwụsiri ike.
Ma ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ ngwá ọrụ dị oke ọnụ maka nkọwa ya, ị na-ezighị ezi, ọ dịkarịa ala ọkara. Nke a dị maka € 800, Ọ bụ ya mere anyị ji kwuo ihe "dị ọnụ ala", n'ihi na ọ bụ ọnụ ahịa dị ala karịa ihe ha na-arịọ anyị maka laptọọpụ ndị ọzọ na-ewu ewu maka nkọwa ndị yiri ya.
Gygabyte AERO 15 bụ kọmpụta dabara aha ya: anụ anụ. Ọ bụ laptọọpụ nwere 4-inch 15,6K ihuenyo mmetụ na OLED panel na imewe nke na-adọta ọtụtụ nlebara anya, ya mere ọ ga-amasị ndị egwuregwu. Tụkwasị na nke a, imewe a na-enyekwa anyị ohere itinye ihuenyo n'ọnọdụ dị iche iche.
N'ime, "eri anụ" a nwere otu n'ime ike ya na 16GB nke RAM, mana kaadị eserese ya. NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB ọ dịghị anya n'azụ. Ọ dịghịkwa n'azụ na nchekwa na ụbụrụ, ebe ọ na-agụnye diski 512GB SSD na Intel i7 processor nke anyị ga-eji nweta nnukwu ọsọ ọsọ n'agbanyeghị ọrụ anyị ga-arụ.
Ma onye na-eri anụ a nwere ihuenyo dị ịrịba ama sitere na Gygabyte ọ bụghị naanị maka ịrụ ọrụ ya, kamakwa maka akpa ego maka ọnụahịa nke na otu a dị nso. banyere € 1600 ọ bụ ezie na ọ na-adịkarị ọnụ ala na onyinye anyị hapụrụ gị na mbụ.
Prestige MSI a bụ kọmpụta nwere ọkụ, obere obere ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ụfọdụ nkọwapụta nke laptọọpụ a gụnyere. Iji nweta ìhè a, ụlọ ọrụ ahụ ahọrọla ihuenyo 14-inch, mana nke na-enye nnukwu mma ekele maka mkpebi 4K ya.
N'ime, Summit na-agụnye i7 processor nke ga-eme ka ọtụtụ n'ime ọrụ anyị na-arụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-egbuke egbuke anya, nke draịvụ ike na SSD, 1TB na ngwá ọrụ a, ọ dịghịkwa ihe na-erughị ala. 32GB Ram, yabụ anyị nwere ike ime ọtụtụ ihe, ngwa ngwa na ihe niile n'otu oge.
Dị ka ọtụtụ laptọọpụ nwere ihe ngosi 4K, anyị enweghị ike ịsị na MSI a dị ọnụ ala, mana nke ahụ € 1800 na-arịọ Maka akụrụngwa a, na-eburu n'uche nkọwa ya, ha dị ntakịrị ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ha na laptọọpụ ndị ọzọ nke ụdị dị mkpa.
MacBook Pro nke Apple bụ laptọọpụ ama ama na enweghị ụkọ ihe kpatara ya. N'akụkụ ya bụ n'ihi sistemụ arụmọrụ, macOS na-enye arụmọrụ dị mma, imewe dị mma na gburugburu ebe obibi nwere anyaụfụ. N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara ihe ndị ọ na-achịkọta, n'ime nke processor ga-apụta ìhè. Intel i9 nke na-eme ka anyị na-agba ọsọ n'ụba. Mana, na mgbakwunye na ọsọ, anyị nwekwara ike ime ọtụtụ ihe n'otu oge, ebe ọ gụnyere 16GB nke RAM. Ejiri diski SSD mezue ihe a nke nwere ike iru 1TB nchekwa.
Ihe nlereanya kachasị ọhụrụ gụnyere nke Aka Ogwe. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ ogwe aka na-anọchi anya ogwe ọrụ iji nyekwuo ndụ ha ma anyị nwere ike iji ya mee ka nrụpụta anyị dịkwuo mma. Ọ na-atọkwa ụtọ na ọ gụnyere Touch ID nke ụlọ ọrụ na-ewu ewu ọtụtụ afọ gara aga, nke na-enye anyị nchekwa na nkasi obi ka ukwuu mgbe anyị na-emeghe akụrụngwa ma ọ bụ ọbụna na-akwụ ụgwọ n'ịntanetị.
Isi ihe ndị ọzọ ị ga-eburu n'uche dị na Ngosipụta 16-inch True Tone nke ahụ ga-agbanwe ụda nke agba na-adabere na gburugburu ebe obibi ka echiche ahụ ghara ịgwụ ike ma ọ bụ na ọ na-agụnye ndị na-ekwu okwu isii, nke na-eme ka ihe ọ bụla anyị na-ege ntị ga-eji àgwà kachasị elu nke laptọọpụ nwere ike inye.
Ọnụ ego anyị nwere ike nweta MacBook 1TB bụ ihe dị ka € 2800, Ihe nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche arụmọrụ na ihe niile nke laptọọpụ kacha mma nke apple brand na-enye anyị.
Laptọọpụ Anya Microsoft
Buru n'uche na Laptọọpụ dị n'elu ọ bụghị laptọọpụ nwere ihuenyo 4K, ma nke ahụ dị na ndepụta a maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Nke mbụ bụ nke gị mkpebi 2496 × 1664 Ọ gaghị adaba na ụdị ọ bụla ọzọ n'ihi na ọ dị n'etiti 2K (2560 × 1440) na 4K (3840 × 2160). Ihe ndị ọzọ kpatara ya bụ ihe otu a ga-enye anyị, nke na-abụghị obere ihe.
Ọ bụ ultralight kọmputa sitere na ụlọ ọrụ na-emepụta sistemụ arụmọrụ desktọpụ kachasị eji na mbara ala. Na ọ na-agbanwe agbanwe pụtara na anyị nwere ike wepu kiiboodu wee jiri ya dị ka mbadamba ihe, na-eji ohere nke Windows 10 interface emebere maka ya, ma ọ bụ hapụ ya ma jiri ya dị ka kọmputa desktọọpụ. Ọ na-aga n'ekwughị na, iji nwee ike iji ya dị ka mbadamba nkume, ihuenyo ahụ ga-abụ nke na-emetụ aka.
Banyere nkọwa ndị ọzọ dị mkpa, ikekwe ikiri ụkwụ Achilles gị bụ i5 processor nke anyị enweghị ike ikwu na ọ dị njọ, mana ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na anyị atụle na ị ga-ebugharị ihuenyo nwere mkpebi dị elu. Ebe ọ ga-aga karịa ahụ iru ala bụ na ncheta 8GB RAM na draịvụ ike SSD (128GB ụdị ntinye) nke ga-eme ka ihe niile rụọ ọrụ nke ọma n'agbanyeghị na ị na-ebunye ihe nrụpụta ọkara.
Ihuenyo nke elu a bụ 15 sentimita asatọ, nke na-eme ka anyị nwee kọmputa dị ọkụ n'otu aka na mbadamba "Pro" n'akụkụ nke ọzọ. Anyị nwere ike nweta nke a kọnvatịbụl maka ọnụ ahịa nke ihe karịrị € 950.
4K ma ọ bụ Full HD laptọọpụ?
Nke a bụ ntakịrị ihe ma ọ bụ nke ukwuu. Dị ka anyị ga-akọwa ma e mesịa, ọ ga-adabere n’ihe anyị ga-eji ya mee na ego anyị chọrọ ime. A Ngosipụta 4K dị ọnụ karịa Ma ọ na-efukarị ego ịkwaga kwa, yabụ ị ga-achọ ndị internals dị ike karị. Ihe a niile na-asụgharị n'ime ego dị elu, yabụ tupu ịzụrụ laptọọpụ nwere ihuenyo 4K, anyị ga-eche ma ọ bụrụ na anyị ga-erite uru na ya ma ọ bụ na ọ bụ naanị okomoko na-adịghị anyị mkpa n'agbanyeghị na anyị nwere ike imeli ya.
N'aka nke ọzọ, Full HD ma ọ bụ FHD bụ mkpebi nke 1920 × 1080 pikselụ, nke dị mma karịa ọtụtụ ikpe. Mụ onwe m, onye nwere laptọọpụ FHD, agaghị akwado obere, ọ bụrụhaala na anyị nwere ike ịzụta kọmpụta nwere mkpebi ahụ, mana agaghị m akwado karịa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka ọrụ ma ọ bụ ihe ntụrụndụ anyị. Maka ojiji m, a ga m asị na ọ ka mma ịhọrọ ihuenyo HD zuru oke maka oke ọnụ ahịa-arụmọrụ. Maka ojiji gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ọrụ metụtara ndezi onyonyo, ikekwe ị nwere mmasị na 4K, ma ọ bụ opekata mpe ebe etiti na-anọ na 2K.
Enwere laptọọpụ 4K dị ọnụ ala?
Ọ dị nke ọma Ọ ga-esi ike. Enweghị ọtụtụ TV 4K dị ọnụ ala, ndị a bụ ngwaọrụ ndị na-adịghị eji sistemụ arụmọrụ desktọpụ. Kọmputa ga-ebugharị sistemụ arụmọrụ niile ma ọ ga-emerịrị ya na ihuenyo 4K, nke dị oke arọ n'ihi ọnụọgụ ozi (ịdị mma onyonyo) ọ na-eji. Iji nweta nke a, ịchọrọ ihe ndị dị ike karị, nke na-atụgharịkwa n'ime ọnụahịa dị elu.
N'onwe m, anaghị amasị m ịbụ onye na-amachibido ma agaghị m asị mba, mana ọ na-esiri m ike. Kọmputa nwere ihe ngosi 4K bụ gbadoro anya na ọha na-achọsi ike Ndị ọrụ a na-achọkwa ihuenyo dị mma, ezigbo processor, RAM dị mma, ezigbo diski ike, ezigbo eserese na, na nkenke, ihe a na-akpọkarị "cucumber" ghọrọ kọmputa. Kọmputa kacha mma dị oke ọnụ na, na kacha mma na ịdị mma, m ga-ekwu na enwere ike ịnwe laptops 4K "dị oke ọnụ", mana ha ka ga-adị ọnụ ma e jiri ya tụnyere HD zuru oke ma ọ bụ naanị HD. Ọ bụghị n'ihi naanị ihuenyo, mana n'ihi na ndị ọzọ na-eso gị gaa n'ọkwa dị elu.
Kedu ka laptọọpụ 4K kacha kwesịrị ịdị ka
Ihuenyo 4K abụghị ihuenyo nkịtị. Ọ bụ ezie na ọ bụ otu nha, ọ dị ka a ga-asị na ọ ka ukwuu. Ogo ya adịghị emetụta akụkụ ya, kama na ọnụọgụ pikselụ dị na ya. Ya mere, anyị na-ekwu maka ya ihuenyo nke na-efu karịa ịkwaga, na iji bugharịa ihe ndị dị arọ anyị chọrọ moto dị ike karị. Anyị nwere ike ịsị na injin nke kọmpụta bụ ihe nhazi ya na laptọọpụ nwere ihuenyo 4K enweghị ike ịnwe nhazi pụrụ iche.
Na 2020, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laptọọpụ ọ bụla kwesịrị nnu ya na-ebunye Intel i5 ma ọ bụ AMD Ryzen 5 processor, nke a na-ekwu maka kọmputa nwere enyo nkịtị. Ngosipụta dị mma na-apụta na ya i7 / Ryzen7 processors, abụọ processors na-eme ka ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma na kọmputa na Full HD ihuenyo. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke kọmputa ndị nwere ihuenyo 4K na-agụnye ihe nhazi nke kwekọrọ na 7 sitere na Intel na AMD, ma e nwekwara ụfọdụ na ụmụnne ha ndị dị nta sitere na 5. N'onwe ya, agaghị m akwado ya na nke kacha nta nke m ga-akwado bụ. i7 ma ọ bụ Ryzen 7. Ee Akpa gị na-enye ya ohere, ahụmahụ ahụ ka nwere ike imeziwanye ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ i9 ma ọ bụ Ryzen 9 nke na-ebuli kọmpụta ihuenyo 4K kachasị elu.
Ram o kwesịghị ịbụ otu n'ime isi ihe kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ kọmputa nwere ihuenyo 4K ma ọ bụ ọzọ, ma ọ bụ nke ahụ bụ ihe mbụ anyị nwere ike iche. RAM bụ ebe nchekwa anyị na-eji, nke na-enye anyị ohere inwe ọtụtụ usoro oghe. N'iburu nke a n'uche, ọ bụrụ na processor na draịvụ ike emeghelarị ihe onyonyo wee gosipụta ya, RAM agaghị arụ ọrụ… na onyonyo ka dị. Nsogbu a nwere ike ịpụta ugbua ma ọ bụrụ na ihe anyị na-ahụ na-emegharị.
Ọtụtụ kọmputa nwere ihuenyo 4K anyị nwere ike ịhụ na ahịa nwere 8GB nke RAM. Enwere kọmpụta nwere RAM na-abawanye ụba, mana anyị nwere ike ịsị na ego a bụ nke na-aghọ ọkọlọtọ maka ụdị kọmputa niile. Ya mere, a na-atụ aro na opekempe ebe nchekwa RAM nke laptọọpụ nwere ihuenyo 4K ga-enwe bụ 8GB Ram. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na anyị nwere ike imeli ya, anyị nwere ike zụta kọmpụta nwere ebe nchekwa karịa, anyị enweghị ike ịma mgbe anyị ga-achọ ya na ọ ka mma karịa ịghara ịhapụ ya.
Agbanyeghị na 2020 ha ka kwesịrị iwetu ọnụ ahịa ntakịrị, SSD adịlarị ugbu a. N'ezie, kọmputa ọ bụla chọrọ ịdọrọ uche anyị na-eji diski SSD na nke bụ eziokwu bụ na ọ na-eme ka arụ ọrụ nke sistemu arụ ọrụ dịkwuo mma n'ihi oke ịgụ / ide ọsọ ya. Mgbe anyị zụtara kọmpụta nwere ihuenyo 4K, a na-eche na ọ bụ n'ihi na anyị na-achọ ndị ọrụ na anyị achọghị akụrụngwa nwayọ nwayọ, yabụ anyị kwesịrị ịzụta ihe niile na jiri diski SSD zụta ihe.
Banyere ikike ya, ọ ga-adabere n'iji ihe anyị ga-eji ngwá ọrụ eme ihe, ma a ghaghị iburu n'uche ihe: ọ bụrụ na anyị zụta ngwá ọrụ nwere ihuenyo 4K, ọ bụ iji uru ya dị mma, nke pụtara. na anyị ga-echekwa ọtụtụ foto na vidiyo nke mkpebi dị elu. Faịlụ ndị a dị arọ karịa, ọtụtụ MB foto na 4K, yabụ diski ike ga-enwerịrị ikike ka ukwuu na ọ bụrụ na anyị azụta kọmpụta nke ọ ga-ezuru anyị ijikwa faịlụ ndị dị ala.
Na mgbakwunye na SSD nkịtị ma ọ bụ n'ozuzu ya, enwerekwa diski ngwakọ, nwere akụkụ na SSD yana akụkụ na HDD. Ihe dị mma banyere diski ndị a bụ na ha na-ejigide ọnụ ahịa diski nkịtị, ha na-eji akụkụ SSD mee ka sistemụ arụmọrụ na-agagharị n'efu na akụkụ HDD anyị nwere ike ịchekwa ọtụtụ ozi, na-enwe nhọrọ dị ọnụ ala. gụnyere, dịka ọmụmaatụ, akụkụ 128GB na SSD + 1TB na HDD. Ha bụ nhọrọ ọzọ ị ga-atụle, mana icheta na akụkụ HDD ka dị nwayọ.
HDR (High Dynamic Range) na-enye ohere onyonyo igosipụta a nso nso a na-enwu ọkụ na-eme ka ọ dịkwuo mma n'etiti mpaghara ndị kacha dị mfe na nke gbara ọchịchịrị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-eme ka ihe a na-akpọkarị ọdịiche. Ọ bụrụ na anyị zụtara kọmpụta nwere ihuenyo 4K, ọ bụ n'ihi na anyị chọrọ ka o gosi ihe oyiyi na àgwà kacha mma, ya mere ọ bara uru ịzụta ihuenyo na-akwado HDR. Ọ na-aga n'ekwughị na anyị ga-ejikwa ngwaike ndị ọzọ (dị ka igwefoto) na ngwanrọ na-akwado nkà na ụzụ a, ma ọ bụghị ya, ọ ga-adị ka itinye ihe nkiri nke dị na àgwà 1080p ma chọọ ịhụ ya na 4K n'ihi na ihuenyo anyị nwere ike. na-egosipụta mkpebi ahụ.. N'ụzọ ezi uche dị na ya, maka ihe a ga-egosipụta na àgwà kacha mma, a ghaghị ịgwọ nke a nke ọma site na mgbe e jidere ya.
Ogo ihuenyo abụghị ihe dị mkpa iji tụlee. Nke ahụ bụ, ọ nweghị mmekọrịta dị mkpa gbasara 4K, mana ọ ga-adị mkpa dabere na ebe na ihe anyị ga-eji ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwagharị kọmputa ahụ mgbe niile, anyị nwere mmasị na laptọọpụ nwere ihuenyo 13-inch, ma ọ bụrụ na anyị ga-ebugharị ya ntakịrị ntakịrị, echere m na anyị nwere mmasị karị na nke nwere. 15.6 anụ ọhịa ahụ ma ọ bụ ọbụna otu n'ime 17.
Onwe m, anaghị m ewepụkarị laptọọpụ m n'ụlọ, ọ masịrị m kọmputa nwere ihuenyo inch 15.6, mana ndị egwuregwu ma ọ bụ ndị egwuregwu kwesịrị ịhọrọ otu n'ime nha buru ibu. Ọ bụ naanị na naanị anyị maara ihe eji anyị ga-eji kọmputa na naanị anyị maara ihe ihuenyo anyị nwere mmasị na ya.
A na-eji 4K nke ọma ma lelee ya na 40-inch ma ọ bụ ihuenyo buru ibu, ihe nlekota ma ọ bụ telivishọn, ya mere. anyị agaghị enwe ekele maka ọdịiche ọ bụla na àgwà n'etiti 13-17 inch kọmputa. Mkpebi anyị kwesịrị ịdabere n'ihe ndị ọzọ, dị ka ngagharị.
Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ nwere ihuenyo 4K?
N'ụzọ bụ isi, a haziri laptọọpụ nwere ihuenyo 4K maka "ndị ọrụ ike", ya bụ, ndị ọrụ na-achọkarị. Maka ọtụtụ n'ime anyị, ihuenyo nke na-enye àgwà dị otú ahụ adịghị mkpa na Full HD zuru ezu, ma ihe niile dabere na ihe anyị ga-eji ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na e nwere 4K ihuenyo na laptọọpụ, ọ bụ maka ihe na ihe nwere ihe jikọrọ ya, kedu ka ọ ga-esi bụrụ ihe ọzọ, na àgwà na nkenke nke ihe oyiyi.
Ya mere, anyị ga-atụle naanị otu ndị nwere ihuenyo 4K ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-ese foto chọrọ ịhụ ihe oyiyi zuru oke, nke na-agụnyekwa idezi ha. Dị ka mbipụta ahụIhuenyo 4K na-atọkwa ụtọ ma ọ bụrụ na anyị ga-edezi vidiyo, maka otu ihe kpatara foto. Ọ nwekwara ike ịba uru ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị egwuregwu na-achọ ịnụ ụtọ aha anyị na ihe oyiyi kachasị mma ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ọdịnaya n'ụzọ kacha mma, ma echere m na telivishọn adịlarị maka nke ikpeazụ.
Laptọọpụ 4K ọ bara uru?
Ngosipụta 4K nwere mkpebi dị elu na nke ka mkpa, ịbụ obere pikselụ, na-abawanye pixel njupụta kwa mpaghara otu, na-ahapụ ihe oyiyi dị elu. Nke a nwere ike ịdị ka ihe dị mma, ọkachasị ndị na-etinye aka na eserese eserese ma ọ bụ vidiyo, yana maka ndị egwuregwu.
N'ezie, ịzụrụ laptọọpụ 4K ga-apụtakwa ịkwụ ụgwọ a ọnụ ahịa dị elu maka ya, na ihe ngosi mkpebi tupu 4K nwere ike inwe njupụta pixel dị egwu ebe ọ bụ na akwụkwọ ndetu na-eji obere ogwe, ọ bụghị ibu karịa 17 ". N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, n'ọtụtụ ọnọdụ ihuenyo ume ọhụrụ 120 Hz FullHD nwere ike ịdị mma karịa 4K 60 Hz.
Agbanyeghị, maka iji ọnyà ọ naghị adaba ịzụta laptọọpụ 4K, yana obere ma ọ bụrụ na ihe kacha amasị gị gbasara laptọọpụ bụ. nnwere onweDị ka akụkụ ndị a na-achọkarị ike karịa ndị ogbo mkpebi ha dị ala, ha ga-agbapụ batrị ngwa ngwa.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ mmehie ịzụta laptọọpụ 4K na-eche na otú a ka ha ga-esi na-ekiri egwuregwu vidio ha na mkpebi dị elu ma chefuo na eleghị anya GPU nke laptọọpụ ahụ na CPU adịghị. ike zuru oke na-amasị ịkwaga egwuregwu ahụ n'ọ̀tụ̀tụ̀ ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezie na ngwaike zuru ezu iji egwuregwu vidiyo na 4K, nke a ga-enwekwa mmetụta na arụmọrụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị otu ihe ahụ ịkwaga aha na mkpebi ahụ karịa ime ya na nke dị ala.
En mmechi, Ọ bụrụ na ị na-achọ mma na vidiyo, eserese ma ọ bụ egwuregwu vidiyo, mgbe ahụ, 4K nwere ike ịbụ nhọrọ dị mma ma ọ bụrụhaala na ọ na-ejikọta ya na ngwaike dị ike zuru oke na nnukwu batrị, dị ka ọ dị na ụdị egwuregwu. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ọ ka mma ịhọrọ mkpebi dị ntakịrị, dị ka FullHD ma ọ bụ 2K ...
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » 4K laptọọpụ